Ny safidy tsara indrindra mankany Tinder amin'ny 2021 | Androidsis
Ny safidy tsara indrindra mankany Tinder amin'ny 2021
Ny fihaonana amin'io olona manokana io dia hita fa saika tsy ho vita mihitsy. Betsaka ny pejy efa niasa nandritra ny fotoana ela mifototra amin'ny teny nalaina izay olona an'arivony maro no nahatratra fitiavana, zavatra iray izay toa manahirana indraindray eo amin'ny tontolo iainantsika isan'andro.
Iray amin'ireo serivisy mitantana ny ampahany betsaka amin'ny fahombiazana ny Tinder, pejy iray izay misaotra ny fampiharana dia manana mpampiasa mavitrika an-tapitrisany maro. Androany dia maro alternatives to TinderAnisan'izany, maro no fantatry ny fiarahamonina miteny espaniola.
5 Trondro be dia be (POF)
9 Joyride - Mifanena, mifampiresaka ary milalao
LOVOO dia safidy tsara amin'ny Tinder, miaraka amina fandidiana hafa mihitsy, miasa miaraka amina fanontaniana samihafa hamitana ilay profil. Noho ny fiasan'ny CherryPicks dia hasehony anao ny andiana olona mifanaraka aminao indrindra, amin'ny fahalianana, tsiro ary ny vaovao omena.
Fampiharana tonga lafatra hahafantarana olona, ​​na amin'ny lahy na vavy na samy lahy na samy vavy, na amin'ny fizarana zavatra maro na amin'ny maha samy hafa anao. Amin'izao fotoana izao dia misy horonantsary LIVE hifandraisany amin'ilay olona ary mandraisa dingana alohan'ny fihaonana, mety ho an'ny olona sahy.
Ny zava-dehibe tokony hiasana ao amin'ny LOVOO dia ny famenoana ny fampahalalana rehetra, ankoatry ny fampakatra ny sary hafahafa amin'ny galeriana raha mbola mahafantatra anao izy ireo. Izy io dia misy lalao, chat ary mpamaky ranomandry, miaraka amin'ilay farany azonao soratana mivantana amin'ilay olona nahasarika anao. Maherin'ny 50 tapitrisa ny fisintomana an'io fampiharana io ao amin'ny Play Store.
LOVOO - App mampiaraka sy mifampiresaka
Izy io dia iray amin'ireo pejy miorina indrindra amin'ny resaka fiarahana, ary izy koa dia iray amin'ireo tranainy indrindra, miasa hatramin'ny 2006 tamin'ny Internet. Izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra mankany TinderIzy io koa dia manana iray amin'ireo vondrom-piarahamonina lehibe indrindra any Espana sy ny sisa amin'ny tany, miasa ihany koa any ivelany.
Badoo dia manana dingana fanamarinana dingana telo izay mamela ny fifandraisana amin'ny piraofilina voamarina, ho fanampin'ny ekipa dia manafoana ireo mombamomba azy izay manandrana manararaotra ny fiarahamonina. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana mampiaraka feno indrindra, manana ny ampahany aminy maimaim-poana, na dia hahatratra ny piraofilina sasany aza dia mila mandoa vola ianao.
Ny maody premium an'ny Badoo dia hahatonga anao hitombo ambonin'ny olona hafa, hiresaka mivantana amin'ny olona ary safidy hafa manokana ao anatin'ny serivisy. Badoo mandefa fampidinana 100 tapitrisa ao amin'ny Play Store, izay iray amin'ireo ankafizin'ny vondrom-piarahamonina Latino sy ny sisa amin'ny tany.
Bumble dia mitovy amin'ny Tinder, satria fampiharana ampifandraisinao izany, fa ny zazavavy kosa dia tsy maintsy mandray ny dingana voalohany amin'ny fanekena ny resaka. Manolotra serivisy maimaimpoana ilay fitaovana, saingy voafetra ihany ny fananana fizarana Premium amin'ny euro vitsivitsy isam-bolana mba hanana safidy fanampiny maro.
Lafiny iray miavaka ny famolavolana, ny tontolo iainana dia sariaka be ary mora ampiasaina, indrindra amin'ny fahafahanao mandefa hafatra mivantana amin'ilay olona izaranao fialamboly sy fitoviana. Bumble dia mitombo ao amin'ny vondrom-piarahamonina Hispanika. Mahatratra 10 tapitrisa ny fampidinana ao amin'ny Android.
Bumble - mampiaraka, namana ary tambajotra
Safidy lehibe io, izay safidy tsara indrindra amin'ny Tinder raha Premium ianao, satria ny safidy dia sokafana amin'ny famandrihana amin'ny vola raikitra isam-bolana. Meetic no pejy fifandraisana tsara indrindra, izay hanatevinanao ny olona amin'ny firaisana, mifantina vondron'olona ary hihaona amin'ny alàlan'ny fifampiresahana manokana.
Ny elanelam-potoana mahazatra dia eo anelanelan'ny 30 sy 40 taona, na dia miovaova be aza izany, satria misy maro izay ao anatin'ity serivisy fanta-daza ity izao. Meetic dia efa tao amin'ny orinasa efa ela, hany ka hatramin'ny 2001 dia niasa ho tranonkala mampiaraka izy.
Ny mombamomba ireo dia tena 100%, misy ny fanamarinana hisoratra anarana, satria mila olona matotra ianao ary ambonin'izay rehetra manaja ny olona hanaraka. Meetic dia pejy azo itokisana 100%, hany ka lasa nahazo fanajana ny fotoana niasany sy nitondrany. Mihoatra ny 5 tapitrisa ny fampidinana ao amin'ny sehatra Android, saingy mitohy ny fahombiazany noho ilay tranonkala azon'ny olona an-tapitrisany nidirana.
Méeticika, fampiharana mampiaraka. Mihaona amin'ny olona ary mifampiresaka
Trondro be dia be (POF)
Izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra mankany Tinder, satria manana mpampiasa mihoatra ny 70 tapitrisa izy ary rehefa mandeha ny fotoana dia nametraka ny tenany ho safidy lehibe hihaonana amin'ny olona izy. Izy io dia manana kinova maimaim-poana, fa toy ny Premium rehetra dia manampy fanampiny fanampiny mahaliana.
Ny safidy mombamomba ny sary dia manamafy ny tanjona hihaonana amin'ilay olona mifandraika amintsika, noho izany dia tsara ny mametraka ireo angona izay tena manandanja indrindra, indrindra ny tsiro sy ny fialamboly. Trondro marobe, fantatra amin'ny anarana hoe POF, dia iray amin'ireo rindranasa misy naoty avo indrindra amin'ny mpampiasa, mahatratra 3,7 amin'ny isa 5.
Ny POF dia mandefa fisintomana 50 tapitrisa amin'ny Android, fa amin'ny iOS kosa dia misy antsasany mahery, ary koa tranokala hahazoana fidirana haingana, rehetra misy fisoratana anarana fohy. Ny POF dia noforonina tamin'ny taona 2003, iray amin'ireo serivisy tonga 18 taona ary nanavao ny endriny.
POF Free Dating Dating site
Izy io dia fampiharana tonga lafatra hihaonana amin'ny olona manodidina anao, indrindra amin'ireo olona efa hitanao sy nampiasanao ny fangatahana Happn. Manana ny safidinao "Tianao" ny sary hitanao, miaraka amin'ny fampahalalana rehetra, anton-javatra lehibe iray raha te hahalala bebe kokoa momba ilay olona ianao.
Ny fiasan'ny Happn dia mitovy amin'ny Tinder, zavatra mihoatra ny safidy hafa, safidy mahaliana amin'ny fahafaha-mahita fotoana amin'ny fotoana akaiky indrindra. Manampia kinova maimaimpoana somary voafetra, fa toy ny amin'ny hafa, mihatsara i Happn raha mandeha Premium ianao.
Ny app Happn dia hilaza aminao raha efa niampita na nandalo ilay faritra nitovy tamin'io olona io ianao, raha mbola manana rohy fifampiresahana akaiky izy ireo, nefa tsy mampiseho ny toerana misy azy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nihatsara tokoa, hany ka io no iray amin'ireo naoty tsara indrindra amin'ny Play Store miaraka amin'ny fisintomana 50 tapitrisa.
happn - Fivoriana sy mampiaraka
Ny te-hitady fotoana amin'ny fotoana fohy fotoana iray ny iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho azy dia ny FITIAVANA, fantatry ny olona miteny espaniola maro. I LOVELY dia fantatra amin'ny maha-fampiharana tonga lafatra azy hahitana an'io olona manana tsirony mitovy aminao io, mila mameno takelaka alohan'ny hampiasana azy.
Mangataka fisoratana anarana fohifohy ho an'ny fandefasana izany, izay zava-dehibe apetraka amin'ny toerana rehetra izay tianao indrindra raha tianao hampiseho aminao ireo olona tena mitovy aminao ireo. LOVELY dia mitady filalaovana fotoana fohy na fifandraisana matotra, noho izany dia tsy maintsy mazava ianao ary apetraka ao amin'ny sivana amin'ilay fitaovana.
Miaraka amin'ny mpampiasa 50 tapitrisa mahery, LOVELY ampio kinova maimaim-poana misy fetra vitsivitsy, ary koa kinova mandoa izay manokatra ny safidy rehetra. TIA be loatra ny fotoana nametraka ny tenany ho fampiharana tonga lafatra mba hahitana an'io olona tadiavinao be io.
LOVELY - Miresaka amin'ny Singles
Waplog dia mirehareha amin'ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina mitombo haingana indrindra, miaraka amin'ireo mpampiasa 90 tapitrisa, na ho an'ny tranokala lehibe na ho an'ny rindranasa Android sy iOS. Mitaky fisoratana anarana fohy ny tranonkala sy ny rindranasa, ankoatry ny fanomezana fampahalalana hahafahanao miresaka amin'ny olona avy amin'ny vazan-tany rehetra.
Ny fampiharana Waplog dia manolotra anao hanao lalao, lalao tsara kokoa ary firesahana mivantana amin'ireo olona mitovy hevitra aminy, amin'izay manome fotoana anao hiresaka amin'ny iray na maromaro amin'ny fotoana iray. Ny iray amin'ireo tombony dia afaka manao valan-dresaka alohan'ny hahitana anao mifanatrika raha mbola avy amin'ny firenena iray ihany izy io.
Waplog: mampiaraka, mifampiresaka ary mahita
Joyride - Mifanena, mifampiresaka ary milalao
Izy io dia fampiharana tsy mitovy amin'ny hafa, satria ho afaka hanana daty hilalaovana ianao, noho izany ny safidin'ny anarana «Joyride». Joyride dia hangataka anao sary, miankina amin'ny fahombiazan'ny lalao izany, izao dia iray amin'ireo zavatra tsy maintsy azonao isaky ny sary apetrakao amin'ny sehatra.
Raha reraka ianao mitady fampiharana mampiaraka mampihetsi-po, dia iray amin'ireo safidy mety indrindra hihaona amin'ny olona milalao, na ny lahy na ny vavy tsy mitovy na ny mitovy. Joyride dia manana isa 4,5 amin'ny 5, naoty lehibe sy lehibe izay tsy maintsy raisina ho zava-dehibe. Maherin'ny 10 tapitrisa ny fisintomana amin'ny Android.
CSL - Chat. Milalao. Daty
Izy io dia fampiharana heverina ho maimaim-poana, manana fidirana amin'ireo olona rehetra te-hihaona amin'ny olona ary hanao izany nefa tsy mandoa sarany amin'ny kinova Premium. Tonga lafatra izy io raha mitady daty amin'ny andro manokana ianao, na dia tokony manomboka mamorona resaka momba ny faniriana hahazo fitokisana amin'ny olona aza ianao.
JAUMO dia fitaovana azo antoka, mampifandray ny fanakanana fiarovana ho an'ireo mety hanao SPAM ary koa ho an'ireo izay tsy manomboka tianao amin'ny voalohany. Olona tokana voamarina ohatra, mamela ny mombamomba anao diso izay te-hahazo vaovao momba ny mpampiasa.
Toy ny amin'izy rehetra, JAUMO dia mampiditra faritra Premium hananana ny zava-drehetra tsy misy fetra, manome ny mpampiasa an-tapitrisany safidy maro hafa. JAUMO amin'izao fotoana izao dia mahavita mihoatra ny 50 tapitrisa ny fisintomana, izay safidy tsara indrindra amin'ny Tinder.
JAUMO mampiaraka: Chat.Flirt.Ligar
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny safidy tsara indrindra mankany Tinder amin'ny 2021
Fampiharana famokarana 5 ambony ho an'ny Android